Kedu 3D Ngosiputa Anya + CPQ Na-anya Ahịa | Martech Zone
Kedu 3D Ngosiputa Anya + CPQ Na Ahịa Ahịa
Monday, October 7, 2019 Monday, October 7, 2019 Douglas Karr
Bandwit na inye ike na-enyere ụfọdụ ọhụụ dị ịtụnanya n'ịntanetị. Ọ bụrụ n’ikpebie ịmegharị kichin gị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ị ga-ahụ ụfọdụ ezigbo nyiwe ntanetị ebe ị nwere ike dabara ngwa na ngwa ụlọ iji chepụta oghere zuru oke. N'oge gara aga, ọnụego a nwere ike iwe ụbọchị ole na ole, ma eleghị anya ọbụlagodi izu ma ọ bụrụ na ị ga-adọta na injinia na ndị otu imewe iji zụlite ngwaahịa a kapịrị ọnụ nke onye ahịa chọrọ. Inweta ogologo oge dị otu a na - ebute njem ndị ahịa na - adịghị mma ma na - enye ndị ahịa oge ịhapụ ihe ngwọta gị.
Gịnị bụ CPQ?
CPQ na-anọchi anya hazi, ọnụahịa, see okwu. CPQ na-enyere ndị otu aka belata nrụpụta ọrụ na usoro ahịa ha site na ime ka ọ dị mfe ịhazi nhọrọ ngwaahịa na ọnụahịa ya. Sọftụwia a na - eji ngwa ahịa akara na iwu ịnye ọnụahịa iji nye ọnụahịa ndị ahịa n’ime nkeji ole na ole, nke nwere ike ịbụ ntakịrị oge ọ na - ewe ndị otu ahịa ọdịnala ime ya.
Kris Goldhair, Onye isi njikwa akaụntụ, KBMax
Ikike ịhazi ngwaahịa dị mma… mana na-enweghị nsụgharị, enwere ọdịiche na ahụmịhe onye ọrụ yana ọ ga-ekwe omume ịzụrụ na ntụpọ ahụ. Nlere anya 3d na-ebelatakwa ohere nke njehie nhazi.
Ụlọ ọrụ dị ka KBMax na-eme ihe dị iche… na-emepe ikpo okwu maka ndị nrụpụta na saịtị ecommerce iji mee ka ngosipụta 3d nke ngwaahịa ikpeazụ. KBMax na-enye ngwọta ngwanrọ jikọtara ọnụ iji mee ka ire ngwaahịa dị mgbagwoju anya dị mfe, yabụ ị nwere ike inye ndị ahịa gị ahụmịhe ịzụ ahịa enweghị atụ, belata oge nzaghachi na nkeji oge karịa izu, ma bulie ọnụego mgbanwe gị. Nke a bụ nkọwa.
Ngwaọrụ iji gosipụta 3D nwere ike ịnwe nnukwu nkwa na ọrụ IT ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị kpebiri ịnwale omenala iji wuo ihe ngwọta. Nke a bụ ihe KBMax ahịa Tuff Shed mere… mana n'ikpeazụ ụlọ ọrụ ahụ enweghị ike ịkwado ya. Ha enweghịkwa ike ijikọ ngwa ọrụ ya na sistemụ azụmaahịa ya ndị ọzọ. Site na KBMax, Tuff Shed chọtara ọhụụ 3D anya zuru oke dịka akụkụ nke ikpo okwu CPQ ha niile.
E jiri ya tụnyere enweghị ngosipụta, nyocha 2D na 3D nwere ike ịbawanye ọnụego ntụgharị n'ihi na ọ na-enyere ndị ahịa aka ịhụ ma ghọta ngwaahịa ahụ nke ọma.
Pasent 59 nke ndị ahịa ecommerce kwenyere na ihe oyiyi bụ akụ kachasị mkpa mgbe ị na-ekpebi ịzụrụ ihe n'ịntanetị. Site na ịgbanye onye nhazi ochie ha maka ihe ngwọta, 3D CPQ, Tuff Shed nwetara 168% mmụba na ahịa.
Ihe ngosi 3D na-enyekwa aka n'akụkụ akụkụ nke ihe nrụpụta n'ihi na ị na-agafe ala nke ngwaahịa. Mgbe ha ruru n’ahịa ụlọ ahịa, ndị nrụpụta anaghịzi enwe ndepụta nke akụkụ, ha nwere onyogho nke ihe onye ahịa chọrọ. Na mgbakwunye na ngosipụta 3D, KBMax nwere ike iwepụta ezigbo eserese injinia-na eserese na sistemụ CAD dịka Solidworks, nke dị ike n'ezie. Na nke a, ị na-ewere usoro nke ga - ewe ụbọchị ole ma ole ma jiri ya rụọ ọrụ kpamkpam yana ịbelata njehie na-aga na sistemụ.
CPQ, Ngosiputa 3D na B2B eCommerce
Anya 3D na CPQ abụghị naanị azịza B2C, imirikiti ndị ahịa KBMax na-eji sọftụwia ha iji nyere ndị otu ahịa ma ọ bụ ndị otu ahịa aka. Nke a na-eme n'ụdị ọrụ dịgasị iche iche site na biomedical ka ọkụ ụlọ ebe ọhụhụ dị oke mkpa maka usoro ahịa.
Ka ọ na-erule 2020, ahịa B2B eCommerce ga-akarị ahịa B2C wee rute puku ijeri $ 6.6.
Steeti nke B2B E-Commerce na 2019
Kedụ ka ndị ahịa ga - esi hụ na ndị zụrụ ahịa ha nwere ike imefu ọtụtụ puku n'ime ngwaahịa ha ahụtụbeghị mbụ? Ndị ọrụ ụlọ ọrụ kwesịrị ịnye ndị ahịa nwere ahụmịhe ọtụtụ. Ndị na-azụ ahịa chọrọ ozi ndabere niile ha nwere ike ịnweta ma a bịa n'ịzụrụ ihe. Site na onyonyo na vidiyo ịzụta nyocha, ndị ahịa nwere ike ịnyocha weebụ maka ozi ndabere tupu ha akpọtụrụ onye na-ere ahịa.
KBMax nwere ike weghachite faịlụ onyonyo gị dị ugbu a dị ka mmalite mgbe ị na-emejuputa ihe ngosi 3D na usoro CPQ gị. Ọ bụrụ n’inwe onyonyo ndị a niile nke ngwa ahịa gị site na ndị otu injinia gị, ha nwere ike gbari ndị ahụ n’ime igwe anyị ma jiri ha mee ya ka ị ghara ibido n’uche na ị gaghị edepụta ihe niile. Nke a na - emepụta ahụmịhe dị iche na nke gara aga ebe ị ga - ewulite elu.
KBMax nwekwara a Salesforce-integrated CPQ ngwọta!
Nyochaa KBMax's Solutions
Tags: 3d3d na-enye nsụgharịIhe ngosi 3dhaziecpqkbmaxtuff wụsịrị
Etu esi enweta ndi ahia